Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:13 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:58 PM 1 comment:
Labels: ကဗျာ, မူလစာမျက်နှာ, သတင်း, ဆောင်းပါး
တပေါင်းလပြည့် သဲပုံစေတီပွဲနှင့် သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ (၇၇) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ဝိဇာတ မင်္ဂလာပွဲတော်ပင် ဖြစ်ပါတယ်..။ ဆရာတော်ကြီး ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် ဆထက်မက သာသနာပြုနိုင်ပါစေ...။ ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့် ဒကာ ဒကာမများနှင့် တပည့်များလည်း ကျန်းမာ ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေ...။ ထို့အပြင် ဤနေရာမှ ဆရာတော်ကြီးအား ရှေးဦးပဏာမ အနေဖြင့် မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းမှာ လက်ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာမိုး၍ ရှိခိုး ဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်။
ဤကဲ့သို့ ဂါရဝပြုပြီးသည့်နောက် လွန်ခဲ့သော နှစ်များက the voice of Samgha မဂ္ဂဇင်းမှာ
ရေးသားခဲ့ဖူးသော "အာစရိယမှ အာစရိယပူဇာသို့" ဆိုသည့် ဆောင်းပါးလေးဖြင့် ဆရာတော်ကြီးအား ထပ်မံ ပူဇော်လိုက်ပါတယ်။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:58 PM No comments:
At the beginning life is startedaJourney,
We cannot definitely know what is it,
Just found out that,
Inaday, we've had something,
But we've never satisfy,
Going through just another way,
Getting again something,
If possibly satisfied,
Never ever satisfied oneself,
we discover again just about now,
But come to old age,
the result out of solution,
Try to still happen one after another,
Finally we've to go around the cycle of rebirth again.
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:40 AM No comments:
Labels: ကဗျာ, ဘာသာရေး, မူလစာမျက်နှာ, အဆိုအမိန့်
၁၀၉ ၁၁၀ လေဟာနယ်...
အကောင်း အဆိုးတွေ ဝေဖန်သုံးသပ်ရင်း...
ပြိုကျလာတဲ့ ညနေ ဆည်းဆာမှာ...
တသသ ဖြာကျလာတဲ့ အတွေးပုံရိပ်တွေဟာ...
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:32 AM No comments:
ဝေဒနာ ကကြိုးဆင်းနေတဲ့ ညနေခင်းမှာ...
ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေထဲ...
ဆာလောင်မှု လှိုင်းခတ်သံတွေ တဝုန်းဝုန်း ရုန်းထွက်...
ဒီ အတတ် အကျ မငြိမ်တဲ့ လောကအလယ်မှာ...
ပွင့်လာတဲ့ ပန်းတိုင်းကို နမ်းရှိုက်..
ဝေးလွန်းတဲ့ ခရီးကို သွားခဲ့ပြီး...
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:28 AM No comments:
Love can suffer asawind,
We cannot see the air pollution of love.
We can feel at all.
But we cannot pass any attachment of love.
We ignore our destination.
Though we loss happy and healthy.
finally we have to suffer love sick.
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:21 AM No comments:
''အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်တို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ပွဲမြေပြင်နေရာလို သဘောထားခံရမှာကို ကျွန်မအမြဲတမ်း စိုးရိမ်နေပါတယ်''
''အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်တို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ပွဲမြေပြင်နေရာလို သဘောထားခံရမှာကို ကျွန်မအမြဲတမ်း စိုးရိမ်နေပါတယ်'' ထိ...
Aung San Suu Kyi Nobel Peace Prize Speech in Oslo, Norway (2: 16 June 2012 )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ဂုဏ်ပြုဆုများ Daw Aung San Suu Kyi’s International Awards, Honors & Appointments ( 1 ...